Iindaba zeLaser Manufature zeJCZ zeNjineli zeCheif
Incwadana yemigaqo kunye nesifundo
Intloko yeSkena seGalvo
Udliwanondlebe: Isisombululo seRobhothi seJCZ se5G kunye namanye amaShishini
C: (Zemin Chen, Cheif Injineli yeJCZ)
R: Intatheli yeLaser yokuvelisa iindaba
R: Mnu Chen, enkosi kakhulu ngokuba nathi namhlanje.
R: Okokuqala, nceda uzazise kunye nemeko esisiseko yenkampani kunye nophuhliso.
C: Molo, ndinguChen Zemin weJCZ. I-JCZ inikezelwe kunikezelo lwe-laser kunye neemveliso zolawulo kunye nenkqubo yokubonakalayo. Kwimveliso ye-laser, iimveliso zethu zikwisikhundla esiphambili, ngakumbi iskena sayo se-galvo kunye nesoftware yolawulo. Sineepatent zethu zesoftware kwaye sinamaqela agqwesileyo agxile kwezi mveliso. Namhlanje, ungabona iimveliso ezintsha apha.
R: Ewe. Ndibona iKuka Robot apha. Ungasixelela ngayo? Njengokusetyenziswa kwayo.
C: Le yenye iimveliso zethu ezintsha. Idibanisa i-3D galvo scanner kunye neerobhothi eziphuhliswe phantsi kweemfuno zeshishini le5G. Imveliso ebonisiweyo yinxalenye entsonkothileyo ye-eriyali ye-5G, eneemilo ezininzi ezinzima. Iskena se-galvo ye-3D, irobhothi, kunye nesoftware yethu algorithm inokunceda ekufezekiseni imveliso yeerobhothi ezenzekelayo ye-antenna ye-5G. Ngokwesicwangciso-qhinga sesizwe sase-China, amakhulu amawaka e-5G kwizikhululo ezisisiseko ziya kusekwa kulo nyaka, zininzi ukuya kwi-eriyali kwisikhululo esinye esisisiseko. Ke ibango le-eriyali kufuneka libe ngaphezulu kweeyunithi ezilishumi okanye amashumi amabini ezigidi. Kwixesha elidlulileyo, besixhomekeke kwindlela yokuvelisa esisikhokelo, kwaye ukusebenza kwayo kunokuba sezantsi kakhulu, ekucacayo ukuba akunakufikelela kwimfuno yentengiso. Ke siyiphuhlisile le teknoloji ukuhlangabezana neemfuno zentengiso. Irobhothi endiyikhankanyileyo yiKuKa, kodwa enyanisweni, ayikhawulelwanga kwimodeli enye okanye uphawu. Ujongano lubanzi.
R: Ke kunokwenzeka ukuba wenze isisombululo ngokwezifiso?
C: Ewe. Ayikhawulelwanga kwiifowuni ze-5G ze-eriyali. Inokusetyenziselwa ukuqhubekeka kwezinto ezininzi ezintsonkothileyo. Umzekelo, ezinye izigqubuthelo imoto-ntathu kumphezulu entsonkothileyo.
R: Ukhankanyile isisombululo. Ngaba iphuhlisiwe kulo nyaka?
C: Ewe, kulo nyaka.
R: Ngaba uceba ukuyikhuthaza ngomboniso?
C: Ewe. Yile nto siyenzayo ngoku.
R: Ngaba ziziphumo zophando zamva nje zalo nyaka?
C: Ewe. Kwaye ndiyathemba ukuba singafumana ezinye izicelo ngokuzibonisa abantu. Ayingabo bonke abantu abeza kulo mboniso benza i-antenna ye-5G. Le nkqubo inokusetyenziselwa ezinye izicelo, ke siyathemba ukuba abathengi banokuphinda benze iingqondo baphonononge iinkalo zesicelo.
R: Kulungile. Leliphi ifuthe eliza kubakho kulo bhubhane walo nyaka kwiJCZ? Okanye yeyiphi imingeni emitsha eyizisayo kwiJCZ?
C: Ubhubhane uchaphazele amashishini ahlukeneyo ngokwahlukeneyo. Amanye amashishini okanye iimarike kwezinye iindawo zisenokuncipha, kodwa ezinye zisenokukhula. Kwincopho yalo bhubhane, oomatshini beemaski babethengisa kakhulu. Iimaski zifuna ukumakishwa kwe-laser ye-UV, oko kwakuthetha ukuba kukho imfuno, ke ukuthengisa kwethu kwakhula ngokukhawuleza ngelo xesha. Kwimeko yonke kulo nyaka, imakethi yethu yasekhaya kunye neimalike zaphesheya ziyahambelana. Ngexesha lokuqhambuka kobhubhani eTshayina, imarike yaphesheya igcine amandla. Emva kokuqhambuka kwesi sifo kwamanye amazwe, nangona kunjalo, ukuqala kwakhona komsebenzi e-China kusizisele ithuba elihle.
R: Kwakhona lithuba leJCZ, akunjalo?
C: Ndicinga ukuba ayilo thuba nje le-JCZ, kodwa nawo onke amashishini azimiseleyo ukuphonononga.
R: Nceda uthethe malunga nolindelo lwakho kunye nethemba kumzi mveliso we-laser.
C: Umzi mveliso we-laser unokuthiwa lushishino lwemveli kakhulu. Bendisebenza kumzi mveliso we-laser ngaphezulu kweminyaka engama-30. Kodwa ikwalishishini elitsha kakhulu kuba ukuza kuthi ga ngoku, kusekho abantu abaninzi abangaqhelananga nomzi mveliso we-laser. Ke ngokubhekisele ekusetyenzisweni kwelaser, uphuhliso, okanye ukuthandwa, amasimi amaninzi anokuphononongwa, kwaye kunokwenzeka ukuba kusetyenziswe ngokubanzi kubomi bemihla ngemihla yomntu wonke. Sele isetyenziswa kwezemfundo, kwezonyango nakwimizi-mveliso yezolimo. Okwangoku, asizinzanga kakhulu kubo, kodwa kulapho siza kuba sicinga kwikamva.
R: Isikhokelo sokuhlola.
C: Ewe. Ukuba sinokwandisa i-laser njengezixhobo zasekhaya, ibango lemakethi liya kuba nokukhula okuhle. Kudala sikhangela impumelelo, sijonga umkhombandlela wophuhliso.
R: Ewe, enkosi kakhulu, Mnu Chen, ngokuba nathi. Ndiyathemba ukuba iJCZ iya isiba ngcono. Enkosi.